Ubunzima bempilo benze wasungula ibhizinisi lamanzi
AMANZI asebhodleleni iStayUp Premium water
PHILI MJOLI | January 16, 2020
UNksz Nothando Mazibuko (26) usesungule inkampani yakhe edayisa amanzi asebhodleleni iStayUp Premium Water.
Le ntokazi edabuka eThekwini eneziqu zePublic Relations, ithi ukuvula ibhizinisi kuyifikele ngemuva kokuthi ingawutholi umsebenzi ewufundele yabona ukuthi kumele ishintshe ukucabanga izivulele amathuba omsebenzi.
UNksz Mazibuko uthi wayezimisele ukuthi uma ephuma esikoleni uzoya enyuvesi kodwa izinto azihambanga ngokucabanga kwakhe njengoba agcina esesebenza esitolo esidayisa igilosa ngo-2013.
“Impilo yangibeka lapho bengingalindele khona kodwa ngakujabulela ukuhola, angizange nginake ukuthi iholo lincane ngoba ngangingakaze ngisebenze. Ngonyaka wesibili ngisebenza ngakwazi ukuthola uxhaso lwemali yokufunda, ngazitshela ukuthi kuzongandisela amathuba okuthi ngiqashwe. Ngangicabanga ukuthi kuzoba lula ukuthola umsebenzi kodwa akubanga njalo,” kusho yena.
Ngemuva kokuphothula izifundo zakhe uthi akazange awuthole umsebenzi wazithola esenza umsebenzi wokubamba izingcingo enkampanini yezobuchwepheshe ngoba ebona ukuthi kungcono kona kunokubhuquza ekhaya ngoba ethi ufuna ukwenza umsebenzi awufundele.
Ngemuva kwesikhashana lowo msebenzi waphela wasebenza eCall Centre, kulapho athi wafikelwa wumqondo wokuthi aqale ilebuli yakhe yezingubo ngo-2017. Izingubo zakhe uthi bezithengwa, ezidayisela amakhasimende angabangani bakhe namanye awathola ezinkundleni zezokuxhuma kodwa ekupheleni kuka-2018, ancipha amakhasimende.
USEZIQALELE inkampani yakhe edayisa amanzi asemabhodleleni uNksz Nothando Mazibuko oke wasebenza ezitolo ezidayisa igilosa Isithombe sithunyelwe
Imali abeyithola ngokudayisa izimpahla uthe igcine isincane engasakwazi ukuziphilisa ngayo.
“Ngonyaka odlule ngathatha isinqumo sokuthi ngiyeke ukulandela izinqumo zempilo engizibekele zona, ngokulandelana kwazo, ngaqala ibhizinisi lokudayisa amanzi asemabhodleleni yize besingakafiki isikhathi ebengihlele ukuthi leli bhizinisi ngoliqala ngaso. Angilindanga ukuthi ngithole uxhaso noma ngithole isitolo esizodayisa umkhiqizo wami okuyinto engiye ngiyibheke uma ngiqala ibhizinisi. Njengamanje angikabi naso isitolo esikhulu engidayisa kuso umkhiqizo wami , ngidayisela izitolo ezincane, nabantu abajimayo, la manzi awanazithako okwamanje, ngiyethemba ukuthi uma likhula ibhizinisi ngizokwazi ukuba nezinye izinhlobo zamanzi,” echaza.